Ciidamada dowladda Puntland iyo maleeshiyada ISIS oo ku dagaalamay deegaanka Bashaashin ee gobolka Bari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada dowladda Puntland iyo maleeshiyada ISIS oo ku dagaalamay deegaanka Bashaashin ee gobolka Bari
December 3, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidamada hubaysan ee dowladda Puntland. [Xuquuqda Sawirka: Puntlandi]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Puntland iyo maleeshiyada ISIS ayaa ku dagaalamay deegaanka Bashaashin, kaasoo qiyaastii 35km dhanka bariga kaga beegan magaalada Qandala, sida ay ilo-wareedyo u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Ma jirto wax war ah oo deg deg ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka ilaa iyo hadda.
Howlgalka Qandala looga xoreynayo ISIS oo muddo bil ah xukumaysay, ayaa ka dhigaya in markii ugu horeysay ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada ISIS ku dagaalamaan gobolka.
November 10, 2016 Gaashaanle sare Qodhob: u dulqaadan mayno maleeshiyada Galmudug in ay barakiciyaan ayna argagax ku sameeyaan dadkayaga
October 26, 2016 Maleeshiyada ISIS oo ka baxday Qandala saacado kadib markii ay qabsadeen magaalada
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa gurmad u diri doonta Muqdisho si looga qeyb qaato caawimaada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii gaariga ee ka dhacay Muqdisho. Kulan deg deg ah oo Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali maanta oo [...]